Ahoana ny fanavaozana ny LG G2 amin'ny LG ofisialy Android Lollipop | Androidsis
Francisco Ruiz | | LG, Tutorials, Android Version
Ao amin'ity fampianarana azo ampiharina vaovao ity ho an'ny mpampiasa a Modely iraisam-pirenena LG G2, fantatry ny rehetra amin'ny hoe D802. Tiako haseho anao ny fomba marina hanavaozana ny terminal Android manaitaitra antsika amin'ny kinova farany an'ny Android Lolipop, amin'ny alàlan'ny Rom custom izay miorina tanteraka amin'ny LG Rom ofisialy ho an'ny LG G2 Model amidy any amin'ny faritany Koreana, ny maodely F320K.
Fantatrao izao, raha irinao havaozy ny LG G2 anao amin'ny kinova ofisialin'ny Android Lollipop vaovao mba hanandramanao ny vaovao manokana rehetra manolotra fa ity kinova fiasan'ny rafitra fikirakirana an'i Andy ity dia manome anao anay, nefa koa mandà ny hamoy ny fanamboarana novaina sy ny Root an'ny terminal Android anao ianao, tsy isalasalana fa ity no fomba tsara indrindra hitsapana an'ity Ny fonon'ny Android Lollipop ofisialy an'ny LG an'ny modely Koreana an'ny LG G2 ary izany tazomy ny fampiharana an'ny LG rehetra.
Voalohany indrindra, lazao aminao fa na dia ao amin'ny horonan-tsary amin'ny dingana farany hametrahana ny SuperSU ary manana fahazoan-dàlana Root, tsy afaka niditra tao amin'ny TWRP Recovery aho ary nieritreritra fa voafafa tamin'ny famoahana ilay rom. Tokony holazaiko aminao fa ny fanarenana novaina dia mbola mitohy hatranyInona no fanovana ny fomba hidirana ao aminy, ankehitriny dia tsy maintsy miditra amin'ny fomba mitovy amin'ny taloha ihany isika, izany hoe, manindry miaraka amin'izay Alefaso midina bebe kokoa ny volanao, na dia mipoitra aza ny sary famantarana LG ary mamoaka ny bokotra isika, rehefa manindry azy ireo indray dia tsy maintsy manindry miaraka ary tsy mamoaka ny bokotra. miakatra ny feo miampy ny volume midina mandra-pahazoantsika ny efijery Hard Reset izay niova koa tamin'ity kinova Android Lollipop vaovao ity avy amin'ny maodelin'ny LG G2 Koreana.
Ny rakitra ilaina amin'ny fametrahana azy Custom Rom Android Lollipop miorina amin'ny iray ofisialy avy amin'ny LG ary fonony ny maodely Koreana an'ny LG G2, azonao atao ny misintona azy ireo amin'ireto rohy manaraka ireto:
TWRP kinova 2.8.4
Bootloader 20H an'ny D802
Fonony LG ofisialy Rom Android Lollipop ofisialy LG LG G2
Raha vantany vao vita kopia amin'ny fahatsiarovana anatiny an'ny LG G2 ny rakitra rehetra alaina dia tadidio fa tsy maintsy adika tahaka ny tsy misy decompressing izy ireo. Hanomboka ny terminal amin'ny fomba fanarenana izahay amin'ny alàlan'ny fitambarana fanalahidy mahazatra ary hanohy hanaraka ireo dingana rehetra izay lazaiko aho tsikelikely ao amin'ilay horonan-tsary mifandraika amin'ny lohatenin'ity lahatsoratra ity.
Zava-dehibe ny fanarahanao ireo dingana rehetra voalaza eto sy izany aza mandingana na amin'iza na amin'izaAmin'ny ankapobeny, ny fanarahana ireo torolalana tena marina ireo dia miankina amin'ny famolavolana tsara ny Rom amin'ny terminal Android anao. Aza adino fa izay nohazavaina eto dia manan-kery ihany ho an'ny maodely LG G2 D802 iraisam-pirenena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » [Video] Ahoana ny fanavaozana ny LG G2 amin'ny Android Lollipop ofisialin'i LG
56 hevitra, avelao ny anao
Matthew Gomez dia hoy izy:
Salama, fanampiana kely, aiza no ahazoako ny fisie ho an'ny D805?
Valiny tamin'i Mateo Gomez
kevin baca dia hoy izy:
Ahoana no ahazoanao lollipop OFFICIAL amin'ny D805?
Valiny tamin'i Kevin Baca
manao ahoana izy ao? Misy bibikely?
miasa ve ny lavitra lavitra? Raha mandeha io dia azoko izao
Miasa tanteraka ny zava-drehetra. Remote haingana, Windows haingana, memo Q sns, sns.
Nahoana araka ny eritreritrao no tsy mandeha ilay d806 ... mijanona ho biriky semi fotsiny dia mahatratra ny logo lg mijanona 3 segaondra, ary miverina miverimberina hatrany hatrany hatrany hatrany mandra-pamonoako azy ... Inona no mety hitranga? Ao amin'ny lesona io, saingy tsy nisy na inona na inona in-3 nanandrako ... inona no tsy ampy?
Aza adino fa izay nohazavaina eto dia manan-kery ihany ho an'ny maodely LG G2 D802 iraisam-pirenena.
Vao nametraka azy aho, ho fanampin'izany rehetra izany dia tsy maintsy namelatra ny baseband an'ny d806 aho hanombohana, saingy tsy manam-peo aho ... nahoana izany?
Nohazavaina tsara tao amin'ny horonan-tsary sy tamin'ny lahatsoratra fa ho an'ny maodely d802 ihany io.
manana lehilahy antitra dia hoy izy:
Mathias, olona goavambe ianao. Tsy mila milalao miaraka amin'ireo zavatra ireo ianao, tokony nanantena olona iray hanao seranan-tsambo manokana ho an'ny 806. Jereo xda raha misy olona afaka mitarika anao, arahaba.
Mamaly an'i tuvieja enntanga
Alvaro Balthazar dia hoy izy:
Manao ahoana ny bateria?
Misy antsipiriany momba ny rom?
Misy tsy fetezana ve?
Azafady mba lazao amin'ny olona iray izay nanao izany raha te hanova ny g2 802 ho lolipop xD aho
Valiny tamin'i Alvaro Baltazar
Enyer Carreno dia hoy izy:
Manao ahoana ianao Francisco…. Manana fisalasalana kely aho, fotoana vitsy lasa izay dia nanavao ny LG g2 d802 tamina tutorial anao avy amin'ny android 4.2 ka hatramin'ny 4.4 aho ary nampiasa famantaranandro ho famerenana amin'ny laoniny ary tonga lafatra ny zava-drehetra. Taty aoriana dia nanaraka fampianarana hafa nataonao ihany koa aho hametrahana ny mod ho an'ny fakantsary Xdabbeb's Camera / Video. Te-hanavao ny Lollipop aho fa tiako aloha ny hitarihanao ahy raha tsy hanana olana aloha aho tamin'ny fampiasana fanarenana hafa taloha sy tamin'ny fametrahana ny fakantsary fakantsary ihany koa. Na araho fotsiny ny fampianaranao vaovao momba ilay taratasy sy voila…. Misaotra sy arahaba
Valiny tamin'i Enyer Carreño
Araho ny tutorial ary tsy hanana olana ianao, eny, alefaso aloha ny twrp zip fanarenana raha tsy mamafa ary miverena indray amin'ny famerenana amin'ny bootloader, firmware ary supersu.
medard dia hoy izy:
Azonao omena ve ny rohy mankany amin'ireo developer exda izay tokony hamakian'ilay rom bebe kokoa ny seranan-tsambony ... Misaotra
Mamaly an'i medardo
Christianen dia hoy izy:
Salama namana androidsis, voalohany indrindra, miarahaba anao amin'ity pejy tsara sy fantsona YouTube ity.
Ireto ny fanontaniako, ity fomba ity dia azo ampiharina amin'ny LG G2 d805 na raha manana fampahalalana momba ny fanavaozana izany modely izany ianao.
Miarahaba anao avy any Chili.
Valiny tamin'i Christianen
kala02 dia hoy izy:
Miasa ve ny OTA?
Mamaly an'i kala02
Salama misaotra tamin'ny fandraisana anjara, fa tahaka ny ambiny tiako ho fantatra raha misy fomba hanaovana izany amin'ny D805 satria manana iray aho ary miaraka amin'ity lesona ity dia tsy azoko. Misaotra !!!
Valiny amin'ny diegote
Frank Gonzalez dia hoy izy:
Azontsika atao ve ny miverina amin'ny kit Kat raha tsy tiantsika izany? Manana lesona momba ny fomba hiverenana ve ianao?
Valiny tamin'i Franco Gonzalez
Percy dia hoy izy:
Misaotra noho ny fandraisanao anjara Francisco efa manana ny lg g2 misy lollipop aho ary holazaiko anao fa nametraka ny faritra sy ny fotoana mandeha ho azy aho ary tsy nanana olana, io anadahy rom io no tadiaviko mihazakazaka tsara ary hatreto ny zava-drehetra tonga lafatra
Mamaly an'i percy
Zavatra iray hafa dia efa voafaritra mialoha 2g / 3g / 4g zavatra izay tsy nananako teo aloha
Deibys Artigas dia hoy izy:
Mahazatra ny manidina ve ny bara fitetezana? ...
Valiny tamin'i Deibys Artigas
Raha vao apetraka ny rom vaovao dia tsy afaka manomboka ny sitrana aho
Ny fanindriana ny haavony sy ny fanamafisam-peo dia manomboka ny telefaona mahazatra fa hita hatrany amin'ny antsasaky ny mangarahara eo amin'ny ilany ankavia amin'ny efijery «mode safe»
Raha manandrana manindry ny herinaratra bebe kokoa aho na miakatra ny habetsaky ny herinaratra dia tapaka indray izany
Ahoana no ahafahako miditra amin'ny twrp amin'izay?
Tonga ny rom tsy misy radio fm ary tiako hiverina amin'ilay teo aloha aho satria ampiasaiko isan'andro.
Voavaha ny fanarenana, apetrako raha sendra olon-kafa mitranga.
Nametraka ny rindranasa "rebooter" aho ary avy aminy no ahafahako mamerina mivantana ny fanarenana.
Deibys Artigase dia hoy izy:
Mianjera be ny fifandraisako finday, ka tapaka ny antso ataoko, manana famerenana tsy ampoizina ihany koa aho ary tara vitsivitsy noho ny mahazatra. Heveriko fa mbola mety ny ho ROM ampiasaina isan'andro, tsy hanome soso-kevitra aho.
Valiny tamin'i Deibys Artigase
Sergio Martin dia hoy izy:
Mijaly aho amin'ny reboot 2/3 isan'andro miaraka amin'ity ROM ity. Tsy milamina mihitsy io. Tsy avelany handeha mivantana eo amin'ny efijery hidin-trano, na dia horonana fotsiny aza no voafantina, mankany amin'ny fampandrenesana Lollipop. Toa tsy dia misy kalitaon'ny sary ilay fakan-tsary….
Valiny tamin'i Sergio Martín
Carlos Alfredo Guillen Montufar dia hoy izy:
Salama, fantatro fa hiteny mafy ahy ianao !!! Fantatro fa natao ho an'ny 802 izy io, saingy nanandrana nametraka azy tao amin'ny 805 aho fa nianjera tao anaty biriky. Na dia afaka niditra tao amin'ilay fanarenana aza aho dia nanandrana nanaparitaka modely hafa ary tsy nisy, farany napetrako ilay iray amin'ireo maodely voalohany (etsy ambony) dia raisiko! Navelako tamin'ny telefaona fastboot ny telefaona, tsy afaka niditra tao amin'ny fomba fanarenana na fomba fisintomana intsony aho. Notadiaviko ny fomba hamerenana azy io ary vitako ny nanomboka azy tamin'ny fomba fampidinana fa hita fa tsy misy rindrambaiko LG mahalala azy, nanandrana ny Ubuntu aho fa tsy fantany koa. Efa nanandrana ilay fitaovana Flash aho fa tsy nisy. Tsy toy ny ahoana intsony, nitady vahaolana hatramin'ny zoma aho ary tsy mahita na inona na inona!
Valiny tamin'i Carlos Alfredo Guillen Montufar
Namana, namaha ve ianao? Moa ve ny telefaona manodina anao farafaharatsiny, sa tsy misy zavatra ataony aminao? ... Miahiahy ny amin'ny raharahao aho ...
lint dia hoy izy:
malalako aho koa liana amin'ilay raharaha satria zavatra mitovy no nanjo ahy 🙁 plz fanampiana! Tsy hitako izay hatao
Mamaly an'i hilas
Antonio jesus dia hoy izy:
Olona Wenas dia manana G2 D802 aho ary tsara apetraka araka ny fanazavan'i mpiara-miasa Fran ary tamin'ny voalohany dia nahomby izany, saingy rehefa nandeha ny fotoana dia niaritra famerenana hafahafa maro aho xD ny marina nefa tsara. Miverina aho hampidina ny zavatra rehetra hatramin'ny voalohany mba hanana rehefa mandeha. Xq ary nanandrana ny cyanogen 12cm ary tsy tiako izany hehe.
Valiny tamin'i Antonio Jesus
Charly dia hoy izy:
3 andro teo ho eo no nandramako azy ary amin'izao dia mandeha amin'ny fahalavorariana izy, ny zavatra tsy dia fahita firy dia ny mandritra ny alina dia maty ny valim-panadinako ary nony maraina dia hitako ilay mitondra lg amin'ny alàlan'ny default, farafahakeliny 2 andro amin'ny 3 niarahako tamin'ny efitrano, androany tsy nitranga, raha namboarina ny lesoka, raha tsy izany dia tena tsara sy ranoka, mandeha tsara ny zava-drehetra, avy amin'ny rahona aho ary tena tsara koa, ankoatrany manome isa 41700 amin'ny antutu, mitovy na mihoatra ny rahona
Manoro hevitra azy tsy misy fisalasalana aho
Mamaly an'i charly
Tsy manao anao io lazaiko io fa mamono ny logo lg mivoaka fa tsy mila apetako ny pin na inona na inona amin'ilay karatra ary raha ny ahy no mitranga amiko dia xD
Antonio Jesus tsy izaho, farafaharatsiny aloha, hatreto dia 2 amin'ny telo andro monja no nesorina ny sary an-drindrina, raha tsy hoe esorina ilay sary mivoaka satria miverina indray ary tsy tsapako izany satria nifanindry foana fa nandany alina be izy natory izy
Izaho dia nanana olana mitovy amin'i Antonio Jesus, matetika matetika no tsy maintsy lazaiko ary izany no antony niverenako tao amin'ny stock rom, nisy ihany koa ny tranga izay nanaparitaka ny fomba fampidinana ity fanavaozana ity ary tsy azo atao ny miverina amin'ny rom tany am-boalohany amin'ny alàlan'ny KDZ dia tsy manome soso-kevitra azy io aho na dia fantatry ny rehetra aza ny loza mety hitranga.
Anio alina dia nisy zavatra mitovy tamiko indray. Fa raha hitako tamin'ity indray mitoraka ity izay nitranga ...
Nofeheziko izy ary tampoka dia nanomboka nihovotrovotra isaky ny 3 na 4 segondra ahetsiketsika kely izy io, samy nanova ny efijery avy amin'ny mainty ho amin'ny pejiko avokoa ny hovitrovitra, ary avy eo mankany amin'ilay sary an-tsaina izay entiny mihetsika.
Mandeha tsara ny efitrano, saingy efa nanome fahatsapana ratsy ho ahy izany, heveriko fa hiezaka ny hametraka azy indray aho ary raha tsy izany dia hiverina amin'ny rahona aho izay mandeha tsara koa.
Tokony holazaiko fa aorian'ny fanesorana azy io, ary hametrahana azy indray dia tsy nahomby indray izy, mandeha tsara tsy misy karazana bibikely na tsy fahombiazana, raha izao no mitohy dia avelako mandritra ny fotoana fohy
Ilay teo aloha ihany dia tsy nametraka tsara na inona na inona antony
Saingy nilaza aho roa andro ary amin'izao fotoana izao dia tonga lafatra 100% ary mandeha tsara daholo ny zava-drehetra
Salama heveriko fa ny cloudy g2 3.0 dia efa navotsotra niaraka tamin'ny android lollipod 5.0.1 mifototra amin'ny tahiry efitry ny kinova Koreana, ny tiako holazaina dia ny efitrano tsotra v1.1 somary kely kokoa na kely aza fa manantena aho fa tsy misy hadisoana kely na tsy misy
Nisy nanandrana azy ary afaka mandefa ireo rohy fampidinana azafady
3 herinandro ary nanomboka natomboka indray isaky ny te hampiasa rindranasa mampiasa gps aho
HTCMania> LG Zone> LG G2> ROMs ary fivoarana LG G2
[ROM] BKD Lollipop Final Lite 5.0.1 (D802 IHANY
5 andro no nanandramako an'io ary omeko 100%
Nahitsin'izy ireo ny bibikely toy ny reboot, ny fahaverezan'ny fandrakofana, ny reboots mampiasa ny app gps ...
Tao anatin'ny 5 andro dia tsy nisy tsy fahombiazana na famerenana indray
Mandrakotra ny fandrakofana, tsara kokoa noho ny stock 20h aza
Ny bateria dia fahombiazana tena tsara, iray amin'ireo tsara indrindra nananako
Haingam-pandeha, milamina, tsiranoka ... mandeha toy ny landy izy io
Misy kinova roa, ny iray tahiry bebe kokoa ary ny iray manana mody natsangana… resaka tsiro
Nanandrana ny acura vaovao ihany koa aho, ny seranan-tsambo pro2 v11.5 an'ny gpro 2 miaraka amin'ny lollipod 5.0.1 ary miaraka amin'ny mody namboarina, ary mandeha haingana ihany koa izy io ary mandeha tsara ary mihinana bateria tsara, tsy misy hadisoana na tsy fahombiazana manasongadina na fahaverezan'ny fandrakofana sy ny reboot
Na iza na iza amin'izy roa dia mahafinaritra, izaho dia mihoatra ny voalohany… resaka tsiro
Samy ao HTCmania izy ireo
Nametraka an'ity aho telo andro lasa izay ary hiverina amin'ny laoniny foana izy io ary nanome olana ahy tamin'ny fifandraisana Wi-Fi sy ny angon-drakitra, saingy namerina azy aho omaly ary ny marina dia tonga lafatra ho ahy izy io amin'izao fotoana izao, ary manome fiainana hafa ho an'ny finday. Manoro hevitra aho 😉
Fanavaozana tena ratsy:
fifandraisana miracast ratsy
Atsaharo indray isaky ny telo isaky ny roa
Faharesena nateraka tany aoriana
Tsy manoro hevitra azy aho, antenaiko tokoa fa tsy manana olana be loatra ilay fanavaozana ofisialy
yhency dia hoy izy:
Salama namana, lazaiko aminao fa manana LG G2 D802 aho fa tsy afaka miditra amin'ny fomba fanarenana fa miverina fotsiny ary manomboka indray.
Mamaly ny yhency
Te hahafantatra aho aorian'ny fametrahana ny rom ny fomba hiverenana amin'ny fanarenana satria miverina fotsiny izy io ary tsy mamela ahy hiverina any ary tsy manana fifandraisana amin'ireo data na antso aho, azafady mba ampio….
Ry namako, manana LG G2 D802 32GB aho, izay nametrahako Lollipop andro vitsy lasa izay. Nosintomiko ny KDZ ofisialy tsy misy mariky ny mpandraharaha, ny kinova Italiana ary nametraka azy tamin'ny LG FlashTool 2014. Miasa milamina ary tsy misy fantsom-batterie lehibe. Tsy maintsy nanampy ny APN fotsiny aho. Manantena aho fa mahasoa anao io. Fiarahabana avy any Chile !.
Nofafako ny rohy fampidinana satria ity dia fomba sarotra iray hanavaozana ary mpampiasa maro no nandao ny terminal tamin'ny semi-brick, afaka mamerina azy amin'ny fahalalana mandroso amin'ny alàlan'ny Linux terminal ary amin'ny ezaka be.
Daniel plz azonao atao ve ny manampy ahy hahita raha afaka manamboatra ny tobiko aho! Mba miangavy re ! w3.fb.com/stefano.viacava raha tianao, miresaka amiko eo, plzz
valkyr dia hoy izy:
Fanontaniana somary adaladala: ny terminal tsy maintsy miorim-paka alohan'ny hanaovana zavatra, marina?
Mamaly an'i valkyr
Ry malala manana g2 any Chile aho miaraka amin'ny Movistar .. Tena tsy fantatro hoe inona izany .. ilay zavatra dia napetraka tsikelikely ny zava-drehetra fa izao dia mijanona eo amin'ny LG logo ary tsy afaka miverina amin'ny fanjakana 🙁 azoko atao ataovy! 🙁
Manana ny lg g2 d802 aho, nanaraka ireo dingana napetrakao aho ary fantatro fa nikatona tampoka teo amin'ny efijery lg izy io ary nivoaka ny logo lg. Tsy hamela ahy handeha amin'ny fomba fanarenana izany. Ampianaro azafady.
Salama e! Tutorial tsara. Manana fanontaniana tiako hapetraka ny cm 12 amin'ny g2-ko. Mila izany bootloader izany ve ianao? ary inona no ilana azy?
Tsy ilaina izany satria ny CM12 dia azo apetraka avy ao amin'ny Kit Kat izay romana inoako fa hahitanao anao izao, raha te-hametraka CM12 ianao manomboka amin'ny Lollipop ofisialy alohan'ny tsy maintsy hampihenanao ny Kit Kat.
OK misaotra betsaka
Salama manana olana amin'ny LG p725 aho, ny nomeko azy io dia ny famerenako ny sandan'ny orinasa ary hadinoko ny nanao Backup taloha: Eny ary ankehitriny ny telefaona dia miditra amin'ny fomba fanarenana ihany ary azoko atao ny miditra amin'ny karatra sd azo esorina. ny fanarenana, Amin'izao fotoana izao ilay rom fa very aho dia ny gimgerbread 2.3.6 ny fanontaniako dia ny fidirana amin'ny fanarenana ihany ary ny SD azo esorina afaka mametraka rom vaovao aho na farafaharatsiny mba hametrahana indray ilay gimgerbread raha izany no izy, inona no hataoko ny dingana tokony hatao, satria fantatro fa raha hametraka rom vaovao toy ny kitkat na lolipop ianao dia mila manaparitaka kernel sy zavatra hafa tsy haiko raha avy amin'ny maody fanarenana ihany.
Tavo QG dia hoy izy:
Ry namako, misaotra anao tamin'ny fampianarana nataonao voalohany, faharoa, tiako ny raha mampakatra na mandefa ahy ireo rakitra hanavao ianao fa ho an'ny maodely D805, satria tena te hanandrana an'ity fitaovana ity amin'ny Lollipop aho ary tsy tiako izany. miandry ny LG hamoaka ny ACT ho an'ity kinova ity
arahaba avy any Costa Rica, Pura VIda
Valiny amin'i Tavo QG
Leuris dia hoy izy:
Afaka manampy ahy amin'ny lg g2 vs980w
Valiny tamin'i Leuris
Miala tsiny fa tsy mandeha ny rohy voalohany, Misaotra.
Ity mitady ny faka ho an'ny LG2 980 misy olona manampy ahy
Ireo fandikana ireo dia mampiseho amin'ny antsipiriany izay ho endrik'ilay HTC One M9 / HTC Hima